Meri Didi - Anbika Giri | Thuprai
by Anbika Giri
The book tries to explore gender bias fromamale perspective with the storyline ofabond between siblings. The lead character Kamal tries to find out why his sister (Aasha) is failing in school whereas she is too in household chores.
बालबालिका र किशोर-किशोरीहरूका लागि पौष्टिक आहार जति चाहिन्छ, त्यति नै चाहिन्छ- असल पढ्ने सामग्री । खानाले उनीहरूको शरीरको विकास गर्छ भने असल पुस्तकले उनीहरूको ज्ञान र चरित्रको विकास गर्छ । तर हामीकहाँ किशोरकिशोरीका लागि असल साहित्यको असाध्यै कमी छ । स्कुलमा पढाइने पुस्तकबाहेक अतिरिक्त पाठ्यसामग्रीको ज्यादै अभाव छ । यही कमी महसुस गर्दै आन्विका गिरी लिखित आख्यान मेरी दिदी प्रस्तुत छ ।
यो आख्यान पढ्दा मलाई आफ्नै जीवनकहानी पढेजस्तो अनुभूति भयो । मेरो पनि एक दिदी हुनुहुन्छ, मभन्दा २० महिना जेठी । मलाई गाउँमा भर्खरै खुलेको स्कुलमा पढ्न पठाइयो तर दिदीलाई पठाइएन । १३ वर्षको उमेरमै दिदीको बिहा भयो । मलाई नरमाइलो लाग्यो तर त्यतिबेला मैले दिदीलाई किन नपढाएको होला भन्ने बुझिनँ । सानैमा किन बिहे गरिदिएको होला भन्ने पनि बुझिनँ । मेरी बहिनी पनि छन्, मभन्दा नौ वर्ष कान्छी । अलि ठूलो भएपछि, पढेपछि मैले कुरा बुझे । त्यसैले घरमा सल्लाह गरेर बहिनीलाई स्कुल हुँदै कलेजसम्म पढाइयो । अहिले दिदी गाउँमा दुःखजिलो गरेर बस्नुभएको छ । बहिनी सहरमा पढाएर सुखसँग बस्छिन् ।
मेरी दिदी हाम्रा किशोर-किशोरीहरूका निम्ति एउटा गतिलो र गुनिलो खुराकका रूपमा आएको छ । यसले सानैदेखि हाम्रा छोराछोरीलाई असल नागरिक बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
ठुलो मान्छे कसरी बन्ने ?
सानीका ज्ञानी कुरा